Home » သတင်း » IBC 2017: SoftAtHome AI အများနှင့်တီဗီန်ဆောင်မှုများ၏အကောင်းဆုံး Presents
IBC 2017: SoftAtHome AI အများနှင့်တီဗီန်ဆောင်မှုများ၏အကောင်းဆုံး Presents
SoftAtHome ဖြေရှင်းနည်းများ အသစ်က YouTube အက်ပနဲ့ audio features တွေနှင့်အတူတိုးမြှင့်, CSI 2017 မှာသုံးကြိမ်ပဏာမ, ဖွစျလိမျ့မညျ တဲပေါ်တွင်ပြသ 5A51
IBC 2017, အမ်စတာဒမ် - 14 စက်တင်ဘာလ, 2017 - SoftAtHome (5A51 ရပ်), ဒစ်ဂျစ်တယ်အိမ်ပြန်ဘို့ convergence န်ဆောင်မှုအားဖွင့်အော်ပရေတာ CPE device များအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲပံ့ပိုးပေး, Artificial Intelligence (AI) ကိုပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အော်ပရေတာ-အာရုံစူးစိုက် IoT နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလက်ထောက်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ IBC မှာဒီနှစ် innovates ။ SoftAtHome လည်း Wi-Fi ကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စမတ်အိမ်မှာစက်ကိုထိန်းချုပ်ဆောင်ခဲ့ SoftAtHome ရဲ့ SOP2 software ကိုစွမ်းအားဖြင့်ဦးဆောင်ခကျြအော်ပရေတာ O3 ရဲ့အသစ်ချထား VDSL8 တံခါးပေါက်, ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
သစ်တစ်ခု AI အလက်ထောက်နှင့်အတူတဲအစည်းအဝေးဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
SoftAtHome နှင့် KaonMedia ပူးတွဲ end-user ရဲ့အသစ်မိတ်ဆွေတစ်-မှာ-နေအိမ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦး AI အ-based လက်ထောက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးမသိမသာကွဲပြားနှင့် Alexa မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုမှုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့စွာမူလစာမျက်နှာန်ဆောင်မှုများ၏အကောင်းဆုံးပေးပို့ဘို့ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။
AI အ-based လက်ထောက်အဆင့်မြင့်ဗီဒီယို features တွေ, အသံထိန်းချုပ်, ချိတ်ဆက်ပီနဲ့အိမ်မှာချိတ်ဆက် devices များအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ပေါင်းစပ်။ SoftAtHome လည်းစမတ်မီတာဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ရာသီဥတုသို့မဟုတ်အသွားအလာအချက်အလက်များကဲ့သို့ရိုးရှင်းသေးအသုံးဝင်သောန်ဆောင်မှုပေါ် အခြေခံ. ဤကဲ့သို့သောစွမ်းအင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အသစ်သောစကားသံကို enabled န်ဆောင်မှုများ, ပေး, Smart Device ရဲ့ဒုတိယအကွာအဝေးကိုသရုပ်ပြနေသည်။
ပိုကောင်းတဲ့တီဗီအတွေ့အကြုံအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ features အသစ်
SoftAtHome သာ. ကြီးမြတ် VOD catalog မတူကွဲပြားမှုများအတွက်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Netflix နဲ့ app တစ်ခုအပြင်တစ်ဦး YouTube ကို certified ရရှိထားပြီး Browser ကိုအပါအဝင်အများအပြားသစ်ကိုသီးသန့်ပရီမီယံ Set-Top-Box ကိုအင်္ဂါရပ်တွေ, သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဘလူးတုသ်အသံလွှဟက်ဆက်များသို့မဟုတ်အသံကအရက်ဆိုင်အဖြစ်အသံ-enabled အဝေးထိန်းဖို့သရုပ်ပြလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏မိသားစုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲတီဗီကိုနားထောင်နိုင်ပါလိမ့်, ဒါမှမဟုတ် Set-Top-Box ကိုကနေထုတ်လွှင့်သူတို့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းနားထောင်ပါလိမ့်မယ်။
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက် O2 မကြာသေးမီက SoftAtHome ရပ်တည်ချက်အပေါ်တစ်ဦးကြယ်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်ကြော့အသစ်များကို box ကိုဖွင့်လှစ်။ အခြားဝန်ဆောင်မှုများမကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာခံရဖို့နှင့်အတူယခုအသစ်ဖြေရှင်းချက်အိမ်က Wi-Fi ကိုကျော်ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုအိမ်လုံခြုံရေး, အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့်အလင်းအိမ်များအတွက်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ IoT န်ဆောင်မှုများ, မီးနှိုးစက်တတ်၏။ အသစ် box ကိုဖောက်သည်ပိုကောင်းသူတို့ရဲ့ကွန်ယက်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်၎င်းတို့၏ချိတ်ဆက်အိမ်မှာ devices များစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် Wi-Fi ကိုအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအမှာစကားပြောကြား။
ယင်း၏နေအိမ်ဆိုက်ဘာကာကွယ်ပေးသူအဘို့, တီဗီအလင်းများများအတွက် SoftAtHome ရဲ့ AI အလက်ထောက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖောက်သည်အဆောက်အအုံ၏ဥပစာနည်းပညာအဖြစ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းပညာလိမ္မော်ရောင်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး Interactive မှတီဗီနည်းပညာ: SoftAtHome ယခုနှစ် CSI ဆုများအတွက်သုံးကြိမ်ပဏာမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CSI ဆုဆုရရှိသူသောကြာနေ့ 15 ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မည်th စက်တင်ဘာလ။
ခန်းမ5အတွက်တွေ့ဆုံ SoftAtHome -5ထံမှ IBC စဉ်အတွင်း 51A15, RAI အမ်စတာဒမ်ရပ်th 19 မှth စက်တင်ဘာလ 2017 နှင့်သင်၏အထူးသီးသန့် AI အလက်ထောက်သရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်။
SoftAtHomeအိမ်တွင်အော်ပရေတာ device များအတွက်ဦးဆောင်ဆက်သွယ်မှု, Pay ကိုတီဗီနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပို့ဆောင်မယ့်အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသော software ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏ SOP ထုတ်ကုန်မှတဆင့် SoftAtHome ထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်အဂေဟစနစ်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်ရောနှောဒေသခံယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကစားသမားဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အော်ပရေတာအားပေးနေသည်။ SOP ရိုးရှင်းပြီးရေရှည်တည်တံ့ရှည်လျားဖြစ်ကြောင်းစံကို အခြေခံ. ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ပို့ဆောင်ရန်ဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်ပြီးသားအဓိကအော်ပရေတာများအတွက်မျိုးစုံဘရော့ဘန်းနှင့်ထုတ်လွှင့်များထားရှိအတွက် 30 နိုင်ငံများထက် သာ. သန်း 18 ကျော်အိမ်တွေပေါ်ချထားလျက်ရှိသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှု www.softathome.com သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကို @SoftAtHome လိုက်နာပါ။
SoftAtHome များအတွက် Marta Twardowska
M က: + 31 621-184-585
T က: @SoftAtHome
CES 2018: SoftAtHome က Ultra Broadband Connectivityon Broadcom နောက်ဆုံး chipset ကိုဖွင့် - ဇန်နဝါရီလ 9, 2018
CES 2018: ဒစ်ဂျစ်တယ်မူလစာမျက်နှာအတွက်ဆန်းစစ်ချက်နဲ့ AI အပေါ်တည်ဆောက် SoftAtHome ပွဲကွက် / စမတ်က Wi-Fi ကိုအောင်မြင် - ဇန်နဝါရီလ 4, 2018
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 SoftAtHome, MStar, CES2017 တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-14
ယခင်: IBC 2017: EBU Booth ON "အလုံးစုံတို့အဘို့ HDR" (10.F20) သရုပ်ပြ Ultra HD ဖိုရမ်
နောက်တစ်ခု: Dejero အမြတ် 500 အမြန်ဆုံး-ကြီးထွားလာကုမ္ပဏီများစာရင်းအပေါ်အများဆုံး
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "IBC 2017: SoftAtHome AI အများနှင့်တီဗီန်ဆောင်မှုများ၏အကောင်းဆုံး Presents" ။ http://www.broadcastbeat.com/ibc-2017-softathome-presents-the-best-of-ai-and-tv-services/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။